Tag: superbowl | Martech Zone
Ihe nchoputa data nye onye mmeri nke nnukwu efere ahia
Mgbasa ozi Super Bowl kachasị dị irè nwere ike ọ gaghị abụ ndị ị chere. Ọ bụ ezie na ikike anyị nwere ịnakọta data na-eto eto, ikike anyị ịghọta data ka na-ejide. Na Perscio, otu ndị ọkà mmụta sayensị data anyị mere nyocha miri emi banyere ọrụ Twitter n'oge Super Bowl ma chọpụta na azụmahịa ndị kachasị ewu ewu abụghị ndị na-enweta nsonaazụ kacha mma. Ọzọkwa, na njedebe nke isiokwu a bụ mmekọrịta mmekọrịta
Daalụ-for maka Nghọta Taa, Indy!
Thursday, June 11, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na Febụwarị m dọtara ụfọdụ ndị abalị na ngwụsị izu mgbe m wepụtara onwe m na Kọmitii Superbowl nke 2012. Pat Coyle kpọrọ m oku mgbe ọ na-arị elu ma nye m ume ka m banye n'ụgbọ ma nye m nduzi ụfọdụ (yana ọ bụ ntakịrị mmepe) iji kekọta ọnụ na mgbasa ozi mmekọrịta na ọchụchọ ga-eme ka aha Indianapolis dị na weebụ niile. obodo ịhọrọ. Saịtị na-agukọtara na ẹdụk ọdịnaya site nile